नेपालमै सम्भव छ– सबै प्रकारका बाल सर्जरीको उपचार – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर २६ गते १०:२२
कान्ति अस्पतालका पाँच बालबालिकामा कोरोना पुष्टि
कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. राईको बिदाइ
कान्ति अस्पतालको टिकट अनलाइनबाटै बुकिङ गर्न सकिने
पेडियाट्रिक सर्जरी नेपाली चिकित्सा जगत्का लागि एक नयाँ अवधारणा हो । विश्वका अन्य मुलुकमा यो सेवा ६०–७० वर्षअगाडि नै सुरु भइसकेको भए पनि नेपालमा सन् १९७१ देखि कान्ति बाल अस्पतालमा सुरु भएको थियो । तर, यसका लागि राम्रो अप्रेसन थिएटरको विस्तार भने १९८० मा जापानी सहयोगमा भएको थियो । तत्पश्चात् १९९० देखि मात्र कान्तिबाट प्रभावकारी पेडियाट्रिकसर्जरी सेवा दिन थालिएको हो ।
पिरियोडिक सर्जरी जवजात शिशुदेखि १८ वर्षको उमेरसम्म गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय आमाको गर्भमा भएको बच्चाको अवस्थाबारे पनि पेडियाट्रिक सर्जनसँग सल्लाह लिने प्रचलन बढेको छ । अल्ट्रासाउन्डजस्ता प्रविधिको सहयोगले गर्भमा रहेको बच्चामा केही समस्या भए–नभएको जानकारी पाउन सकिन्छ ।
गर्भ रहेको करिब १८ हप्तापछि भिडियो एक्स–रेको सहायताले बच्चामा रहेका विभिन्न समस्याबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । गर्भ बसेको १२ हप्तासम्मको समय एकदमै संवेदनशील समय भएकाले त्यतिवेला जथाभावी औषधिको सेवन गर्नुहुँदैन । लामो यात्रा पनि गर्नुहुँदैन । चुरोट, रक्सीजस्ता पदार्थको सेवन गर्नुहुँदैन । त्यतिवेला गर्भको सही परीक्षण गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
बच्चामा हुने मेडिकल समस्याहरू, जस्तै : निमोनिया, रुघाखोकी, झडापखाला तथा सर्जिकल समस्या, जस्तै : नवजात शिशुमा हरियो वान्ता हुनु (जुन आन्द्राका भएको गडबडीका कारण हुने गर्छ) जस्ता समस्यामा पेडियाट्रिक सर्जरीको उपयोग गरिन्छ । नवजात शिशुमा मिर्गौला सुन्निने, मिर्गौलामा पानी जम्ने, लिंगको टुप्पोमा प्वाल नहुने, पिसाबको प्वाल नहुने, जन्मनेबित्तिकै पेट ठूलो भएर जानेजस्ता समस्या देखापरेमा पिरियोडिक सर्जरीको आवश्यकता पर्छ ।
भर्खरै जन्मेको बच्चामा गरिने सर्जरीलाई नवजात सर्जरी भनिन्छ भने जन्मेको एक वर्षभित्र गरिने सर्जरीलाई शिशु सर्जरी भनिन्छ । त्यसैगरी १ देखि ५ वर्षसम्मलाई सानो बच्चा र त्यसदेखि माथि १८ वर्षसम्मलाई ठूलो बच्चा भनिन्छ । उल्लिखित सबैको समग्र रूप नै पिरियोडिस सर्जरी हो ।
यदि नसाको कमी भएर बच्चा जन्मने बित्तिकै पेट फुल्ने, जन्मनेबित्तिकै हर्नियाको समस्या देखिनेजस्ता समस्या देखापरेमा पनि पेडियाट्रिक सर्जरीको आवश्यकता पर्न सक्छ । यस्ता समस्या विभिन्न कारणले आउने गर्छन् । बच्चा गर्भमा बसेको १२ हप्तासम्म बच्चाको विभिन्न ग्रन्थि तथा भागहरू बन्नेक्रम जारी हुन्छ । त्यो समय गर्भावास्थाका लागि एकदमै संवेदनशील समय हो ।
गर्भ रहेको करिब १८ हप्तापछि भिडियो एक्स–रेको सहायताले बच्चामा रहेका विभिन्न समस्याबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । गर्भ बसेको १२ हप्तासम्मको समय एकदमै संवेदनशील समय भएकाले त्यतिवेला जथाभावी औषधिको सेवन गर्नुहुँदैन । लामो यात्रा पनि गर्नुहुँदैन । चुरोट, रक्सीजस्ता पदार्थको सेवन गर्नुहुँदैन । त्यतिवेला गर्भको सही परीक्षण गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । महिनावारी नभएर परीक्षण गराउन जाँदा गर्भ रहेको थाहा पाउनुभन्दा पति–पत्नीबीचको सल्लाहमा सन्तानको योजना बनाएर पनि यस्ता समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ । आकस्मिक रूपमा हुने गर्भमा पनि यस्ता प्रकारका विभिन्न समस्या आउन सक्छन् ।
नेपालमा बच्चाको सर्जरीका लागि पेडियाट्रिक सर्जनकहाँ जाने चलन एकदमै कम छ । यस्तोमा सर्जरीको नतिजा राम्रो नआउन पनि सक्छ । हाल नेपालमा करिब ३० को संख्यामा पेडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध छन्, जुन अहिलेका लागि पर्याप्त नै हो । जशक्ति उपलब्ध भएर पनि नेपालीको पेडियाट्रिकसर्जनकहाँ जाने प्रचलन अभावले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा बच्चाको खाने नली र श्वासनली सँगसँगै हुन्छन् । त्यस्ता बच्चालाई पनि जतिसक्दो छिटो शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्छ । विशेषगरी आमाको पेटमा रहेको वेला खासगरी पुरुष बच्चामा पिसाबको बाटोमा पर्दा हुने गर्छ । त्यसले बच्चाको मिर्गौलासम्म पनि असर पु¥याउने गर्छ । अलि ठूलो बच्चामा आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने गर्छ । त्यस अवस्थामा पनि छिटोभन्दा छिटो सर्जरीको आवश्यकता पर्छ ।
बच्चामा एपेन्डिसाइटिस हुँदैन भन्ने आमधारणा छ, जुन गलत हो । बच्चामा हुने एपेन्डिसाइटिस अन्यमा भन्दा बढी खतरापूर्ण हुन्छ । साना बच्चाले एपेन्डिसाइटिसका लक्षण थाहा पाउन नसक्ने भएका कारण पनि उनीहरूमा बढी जोखिम हुन्छ । यदि पेडियाट्रिक सर्जनले वेलैमा यसबारे जानकारी दिन सकेमा बच्चाको अकालमा हुने मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा बच्चाको सर्जरीका लागि पिरियोडिक सर्जनकहाँ जाने चलन एकदमै कम छ । यस्तोमा सर्जरीको नतिजा राम्रो नआउन पनि सक्छ । हाल नेपालमा करिब ३० को संख्यामा पेडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध छन्, जुन अहिलेका लागि पर्याप्त नै हो । जशक्ति उपलब्ध भएर पनि नेपालीको पेडियाट्रिक सर्जनकहाँ जाने प्रचलन अभावले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
१८ वर्षसम्मका बच्चाको सर्जरी पेडियाट्रिक सर्जनबाटै गराएमा त्यसले पछि हुन सक्ने समस्यालाई कम गर्छ । यसले सर्जरीपछिको नतिजा प्रभावकारी बनाउँछ । नेपालमा अनुभवी तथा दक्ष पेडियाट्रिक सर्जन उत्पादन भइसकेका छन् र अझै पनि उत्पादन हुनेक्रममा छन् । जनशक्ति मात्र नभएर यसमा नयाँ–नयाँ प्रविधिसमेत आइसकेका छन् । प्वाल पारेर सर्जरी गरिने ल्याप्रोस्कोपीलगायत विभिन्न नयाँ प्रविधि पनि नेपालमा आइसकेका छन् ।
करिब २५–३० वर्षअगाडि पेडियाट्रिक सर्जरी गर्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यस्तो छैन । हाल सबैखाले पेडियाट्रिक सर्जरीको उपचार नेपालमै उपलब्ध छ ।
Tags: कान्ति बाल अस्पताल, डा. आरपी चौधरी